Posted by :P at 5:06 AM 1 comment:
Posted by NSA at 11:39 PM 1 comment:
နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေး NLD ပါတီက ဦးကိုနီ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ သေနတ်သမားရဲ့ လုပ်ကြံခံရလို့ နေရာမှာပဲ ကျဆုံးသွားတယ်။
အင်မတန် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့နေ့မို့ မှတ်တမ်းထားထားတာပါ။
နောက်မှပဲ ပို့စ်ကို အက်ဒစ်လုပ်ပြီး ဦးကိုနီဓာတ်ပုံ၊ ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီတွေ ကူးထည့်တော့မယ် ။
ဦးကိုနီ ( ဥပဒေအကြံပေး ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် )
လူသတ်သမားကို အုတ်ခဲနဲ့ထုပြီး ဝိုင်းဖမ်းပေးတဲ့ တက္ကစီဆရာ ကိုနေဝင်းလဲ သေနတ်မှန်ပြီး ဆုံးသွားတယ်။
ကိုနေဝင်း (လေဆိပ် Taxi ဆရာ)
Posted by NSA at 7:09 PM No comments:
မှုံမောင်ကျောင်း Fruit Day
ကျောင်းက Fruit Day က ဗုဒ္ဓဟူးဖြစ်သွားပြီ။
မှုံ ငှက်ပျော( မနှစ်က တနှစ်လုံး စပျစ်သီးစားတယ်။ ဒီနှစ် အစ ကတည်းက ငှက်ပျောသီးထည့်ပေးဖို့ပြောလို့ ) ။
.. မောင်မောင်လေးက လိမ္မော်သီး
တနလာင်္- macaroni ( သို့) ဆန်ပြုတ်
အင်္ဂါ- မိုင်လို ( သို့) နို့
ဗုဒ္ဓဟူး- Fruit Day . အသီးအိမ်ကထည့်ပေးရတယ်။
ကြာသပတေး- ပေါင်မုန့် နဲ့မိုင်လို
သောကြာ - cereal
အပတ်စဉ် ဒီအစာပဲကို အရသာပြောင်းပြီးချက်တယ်။ လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံကလေးတွေ စားလို့ရအောင် အစာအားလုံးက Halal ဟာလာ တွေဖြစ်တယ်။ ဟာလာမဟုတ်မှာစိုးလို့ ကျောင်းသားမိဘများက ပြင်ပအစားအစာကျွေးလို့မရပါဘူး ။ ကျွေးချင်ရင် ကလေးမွေးနေ့မှာ ကိတ်ကျွေး၊ မုန့်ကျွေးလို့ ရပါတယ်။
ကျောင်းပထမဆုံးတက်တဲ့နေ့က ကျောင်းခန်းထဲ ဝင်လိုက်လို့ ရတုံးက ကလေးအမေတယောက် ဆရာမကိုမေးလို့ ဆရာမရှင်းပြတာကြားထားတာ။ ကျောင်းပထမနေ့မှာပဲ ကလေးတွေထဲ vegetarian ပါသလားလို့ မိဘတွေကို မေးတယ်။
Posted by NSA at 10:33 PM No comments:
Posted by NSA at 2:01 AM2comments:
အထုပ်ကြီး ၃ ထုပ်နှင့် ခရီးသည်
သူငယ်တန်းစာပေးစာယူသင်တန်းမှာ စာမေးပွဲမရှိတော့ တနှစ်စာ သင်ယူမှုမှတ်တမ်းကို မိဘကဖြည့်ပြီး မြန်မာသံရုံးကို ပြန်ပို့ပေးရတယ်။ ဖြည့်ရမယ့်စာရွက်က တပတ်ကြိုကတည်းက စာတိုက်ကတဆင့်ရောက်နေတယ်။ ဒီတပတ် စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက် သံရုံးဝန်ထမ်းတွေ ရုံးတက်ပြီး ဒီမှတ်တမ်းတွေ လက်ခံမယ်။ နားရက်မနားပဲ လုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ.. ။ သံရုံးအသိတယောက်မှမရှိတဲ့ ကိုယ့် ဖဘမှာပဲ ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်။ မနက်ကသံရုံးမှာတော့ ကျေးဇူးတင်စကားမပြောခဲ့ဘူး .. ငိငိ ။ ကလေး ၂ ယောက်ကတော့ ပေးလိုက်တဲ့ ချိုချဉ်တွေပါ သမ လာကြသေးတယ်။ 2016 မေလတုံးကလား... ကျောင်းအပ်တုံးကဆို ဝဘ်ဆိုက်က ကြိုကျေညာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းထက်ပိုလိုအပ်နေလို့ သံရုံး မိတ္တူကူးစက်မှာ တနာရီကျော် ချွေးတလုံးလုံးတန်းစီရ.. ကလေးကငို၊ ချွေးကစိုနဲ့ အတော် သုခရောက်ခဲ့တာ။ ကြိုရောက်နေတဲ့ အက်ဒဝင်မေတို့ မာမီ ကူညီလို့ တိုကင်နံပါတ်လေး ရတာ ။ ( မြန်မာပြည်ရုံးတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာ ဒီလိုလုပ်ပါ ညွှန်ကြားလိုက်တော့ ဒီလိုလေး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားရော ၊ တကယ့်နေ့ကျရော .. ဟိုလိုလေးလုပ်လိုက်ပါလားလို့ ပြောင်းပြောတော့ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်ကုန်ရော ဆိုတာ ကြုံဖူးလို့ ဒီလိုကနေ ဟိုလို ပြောင်းတာနေမယ်လို့အဆင်ပြေအောင်တွေးလိုက်တယ်)။ ပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဌာန ၂ ခု တွဲလုပ်ရတဲ့အလုပ်မှာ ကိုယ့်ရှေ့က မြင်နေရတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးက မိတ္တူကူးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းကို ဖိဟောက်နေတော့ ဘာများထူးခြားပြောင်းလဲ သွားမှာလဲ ..။ အဲဒီတုံးက ရာချီနေတဲ့ မိဘပေါင်းများစွာ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ တန်းစီ.. မိတ္တူကူးတဲ့ဝန်ထမ်းလဲ တယောက်ထဲ လက်မလည်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ လုပ်နေရတာကို အတင်းလာ သဟောက်သဟမ်းလုပ်နေတဲ့ လူတယောက်(ကလေးအဖေတယောက်)ကို ပြန်မြင်ယောင်မိသွားလို့ ..။ဘေးကလူတွေအကုန်လုံး သူ့ကို မနှစ်မြို့သလို ဝိုင်းကြည့်ကြ .. သူ့မိန်းမက နောက်ကနေ တိုးဝင်လာပြီး သူ့ဟောက်လိုက်တော့ သူ ငြိမ်သွားရော အေးတာပဲ .. :D :D ။ ကွန်ပလိန့်တက်ချင်ရင်လဲ ထိရောက်တဲ့လူ၊ တာဝန်ရှိလောက်တဲ့လူကိုပြောပေါ့ ..။ နာက်ပြီး သံရုံးဝန်ထမ်းအားလုံးအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ကြားက ပြုံဲးပြုံးရွှင်ရွှင် ဖော်ဖော်ရွေရွေ လုပ်ပေးတယ်။ နင်တို့ကလေးကိစ္စကို ငါတို့ ရုံးပိတ်ရက်ကို မနားရပဲ လာလုပ်ပေးနေရတာရယ်လို့ ဆိုတဲ့ မျက်နှာထား တယောက်မှ မရျိဘူး (စိတ်ထဲတော့ ရှိချင် ရှိမပေါ့ .. ကိုယ်ဆိုလဲ ငြိုင်ြင်မှာပဲလေ..။ ) အဲဒီတုံးက အမှတ်ပေးထားတာ ..။ မဲသွားပေးတုံးကလဲ ပေးထားခဲ့သေးတယ်။ ဟော စကားချော်ကုန်ပြီ ..။ အဲလို သုခတွေ ရောက်ခဲ့တော့ ဒီနေ့သွားရင် အဲလိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ အရင်ရက်ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး တခြား ဘာစာရွက်တွေလိုသေးလဲလို့ သံရုံး Hot Line တွေ ဖုန်းဆက်မေး.. ဆက်မရ ...။ ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ ပြထားတဲ့ အီးမေးလ်ကလဲ inquiry အတွက် ပို့မရဘူးဆိုလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှိသမျှ စာရွက်စာတမ်း .. မြန်မာပတ်စပို့ ၊ စလုံးနေထိုင်ခွင့်ကတ်၊ ကလေးမွေးစာရင်း၊ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား၊ မိဘလက်ထပ်စာချုပ်ပါမကျန် အကုန်လုံးမိတ္တူရော မူရင်းရော ထည့်သွားတာ..။ တခုခုလိုလို့ မိတ္တူကူးရရင် ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ ဒီကလေး ၂ ကောင် (အထူးသဖြင့် ဂျီမောင်မောင်) နဲ့က မလွယ်ဘူး။ ကလေးတို့အဖေက စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အလုပ်မအားဘူး။ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ ၊ ကလေးဝတ်စုံအပိုတစုံစီ၊ အနွေးထည် တထည်စီ၊ မိုးကာ တထည်စီ ၊ကလေးတို့ ဦးထုတ် ၂ လုံး ၊ ပေါင်မုန့် ချောကလက်သုတ် ၂ ချပ်ထပ်ထားတာ ၃ ခု (အစားဂျီးများသော မှုံမှုံအတွက်) ၊ ရေဘူး၊ ရာကွတ်အအေးဘူးလေး ၃ ဘူး ၊ ဘီစကစ်လို ဝါးစရာ ၄-၅ ထုပ် ၊ တစ်ရှူး အစို၊ အခြောက် ၊ တယောက်စီအတွက် ကိုင်စရာအရုပ်အသေး တခုစီ ၊ ထီးတချောင်း၊ အမေအတွက်ရေဘူး ၊ ပိုက်ဆံအိတ် .. အကုန် ည ကတည်းက ကြိုထည့်ထားတယ် ( ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရင် စာရွက်စာတမ်းကလွဲလို့ ကျန်တာ အကုန် အတူတူပဲ ထည့်ရတယ်) ။ နောက်ကျမစိုးလို့ Grab တက်စီ ၁၅ ကျပ်နဲ့ ငှားစီးသွားတာ ၊ တက်စီဆရာ နောက်ကျနေလို့ လူအများကြီး တန်းစီရတော့မယ်ဆို စိတ်တွေပူရ ( သူငယ်တန်း ၂၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ မောင်ကြီးက ပြောထားတာကိုး) ။ တက်စီဆရာအဘိုးကြီးကလဲ ငါ့သူငယ်ချင်း အမည်မဖော်လိုသူဟဲဗီးလေးလို ဒေါ်ဂျီပီအက်စ် ပြောတဲ့အတိုင်း ကွေ့ပတ်မောင်းတာ ခါတိုင်း မိနစ် ၂၀ လောက်ကို ခု နာရီဝက်လောက်ကြာသွားတယ်။ အဲဒီလို ကြိုတင်ပြင်ဆင် အောင်ပွဲဝင်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကြီးကို လိပ်ဖိုးဖိုးလိုလွယ်ပြီး ကလေး ၂ ယောက်လက်ဆွဲ သံရုံးရောက်တော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ အခုမှ စာရွက်ထဲအမှတ်ခြစ်ဆဲမိဘတယောက်ပဲ တွေ့ရတယ်..။ စာရွက်ပေး၊ လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်ရုံပဲ ... ။ ကြိုမိတ္တူကူးထားတဲ့ စာရွက်တွေ ဘာမှ ပေးစရာမလိုဘူး..။ ကူးပြီးသားကြီးဖြစ်နေလို့ ယူထားလိုက်ပါလားငင်လို့ ပေးခဲ့ရ .. ဟင်းးးး. ကိစ္စစောစောပြီးပေမဲ့ ၁၀ နာရီ မိနစ်စွန်းရုံလေးမို့ ကလေးတို့ကိုပြဖို့ အောချတ်က ရှော့ပင်းမောတွေ မဖွင့်သေး..။ ပလာဇာစင်ကာပူရကိုပဲ ကျောပိုးအိတ်တထုပ်၊ မှုံ မောင် ဟူသော ရတနာထုပ်ကြီး ၂ ထုပ်နဲ့ ရောက်..ကစားစရာဆိုင်လိုက်ပြ .. ဆော့ .. မုန့်ကျွေးပြီး ၊ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ် ။
Posted by :P at 1:09 AM No comments:
Posted by :P at 1:25 AM 1 comment:
Tatlong Taong Walang Diyos (1976) FILM STREAMING Completo ITA Online
ダウンロード本気で学ぶ中・上級イタリア語（CDなし） PDF 本多孝昭 B081RWC3PK